You Mon Tsang, CEO an'ny OutMarket
Lahatsoratra nosoratan'i Mon Tsang
You Mon Tsang no CEO an'ny OutMarket. OutMarket dia manome rindrambaiko sy serivisy automatique marketing ho an'ireo ekipa marketing mba hitondra valiny azo isaina.
Zava-dehibe 5 hanatsarana ny automatisation marketing
Talata, Novambra 4, 2014 Mon Tsang
Ho an'ny mpivarotra maro, ny fampanantenan'ny vahaolana momba ny automatisation marketing dia toa tsy tratra. Lafo loatra izy ireo na sarotra loatra ny mianatra. Nofoanako ireo angano ireo sy ny maro hafa tao amin'ny “Manifesto Marketing Modern” an'ny OutMarket. Androany, te-hanafoana angano hafa aho: bala automatique ny marketing automatique. Ny fampiharana rindrambaiko mandeha ho azy dia tsy hampitombo ny fidirana sy ny fiovam-po ho azy. Mba hahatratrarana ireo valiny ireo dia tsy maintsy manatsara ny varotra automatique sy ny serasera ny mpivarotra. Ny fanatsarana dia azo heverina ho